Imibuzo evame ukubuzwa / Buza Isazi - I-Huaxiao Metal Corporation Limited
Ikhoyili yensimbi engagqwali
Ikhoyili yensimbi engagudluki ebandayo
304 304L abandayo iphuma insimbi engagqwali ikhoyili
Ikhoyili yensimbi engenazinsimbi engu-430 ebandayo
316L 316 abandayo iphuma insimbi engagqwali ikhoyili
304DQ DDQ abandayo iphuma insimbi engagqwali ikhoyili
316Ti abandayo iphuma insimbi engagqwali ikhoyili
Ikhoyili yensimbi eshubile eshisiwe
Ikhoyili yensimbi engenasici engu-201 eshisayo
310s ashisayo insimbi engagqwali ikhoyili
Ikhoyili yensimbi engagqwali engu-321 eshisayo
410 410s ashisayo insimbi engagqwali ikhoyili
Ikhoyili yensimbi engagqwali engu-430 eshisiwe
Ikhoyili yensimbi epholishiwe
NO.4 ikhoyili yensimbi engagqwali
Ikhoyili yensimbi engenasici
Ishidi lensimbi engagqwali
Amashidi wensimbi angenasici agoqiwe
409 409L abandayo asongwe insimbi amashidi
Ama-410 410s abandayo ahlanganiswe amashidi wensimbi angenasici
Amashidi wensimbi angenasici angama-430 abandayo
Amashidi ensimbi angenasici
NO.4 amashidi ensimbi engagqwali
Amashidi wensimbi engagqwali
Amashidi wensimbi angenasici
Ipuleti lensimbi engagqwali
Ipuleti lensimbi engagqwali engu-201 eshisayo
304 304L ashisayo ipuleti lensimbi engagqwali
Ipuleti lensimbi engagqwali eligoqiwe elingu-309
310s ipuleti lensimbi engagqwali eligoqiwe elishisayo
316L 316 Hot iphuma insimbi engagqwali ipuleti
Umucu wensimbi engagqwali
umugqa wensimbi engagqwali ogoqiwe obandayo
umucu wensimbi oshisayo osongwe
ngokunemba strip yensimbi
embossed insimbi engagqwali amashidi
Ibha yensimbi engenacingo nocingo
insimbi engagqwali engela Ibha
Insimbi Engagqwali Yesiteshi Ibha
insimbi engagqwali Amacala Bar
Mayelana neSino Insimbi Engagqwali
Ifektri / Warehouse Show
Decoiling & Recoiling & Leveling
Wokucwebezelisa & Ukuxubha
Ukucheba Ishidi / Ukusika
Izinsiza Zokwelapha Nezinsimbi
Iyalayisha / Ukuthumela
Imibuzo evame ukubuzwa / Buza Isazi
IMIBUZO EJWAYELEKILE UKUBUZWA
Athini amanani akho?
Izintengo zethu zingashintsha ngokuya ngokunikezwa nezinye izinto zemakethe. Sizokuthumelela uhlu lwamanani olusha ngemuva kokuthi inkampani yakho ixhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Ingabe unayo ubuncane be-oda elincane?
Yebo, sidinga yonke imiyalo yamazwe omhlaba ukuthi ibe nenani le-oda elincane eliqhubekayo. Uma ufuna ukuthengisa kabusha kodwa ngamanani amancane kakhulu, sincoma ukuthi uhlole iwebhusayithi yethu
Ungakwazi yini ukuletha imibhalo efanele?
Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kubandakanya Izitifiketi Zokuhlaziywa / Ukuvumelana; Umshuwalense; Umsuka, neminye imibhalo yokuthekelisa lapho kudingeka khona.
Siyini isilinganiso sokuhola phambili?
Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ukuze ukukhiqizwa ngobuningi, isikhathi phambili izinsuku 20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo idiphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Yiziphi izinhlobo zezindlela zokukhokha ozamukelayo?
Ungakhokha ku-akhawunti yethu yasebhange, iWestern Union noma i-PayPal:
Idiphozithi engu-30% kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ngokuqhathaniswa nekhophi ye-B / L.
Yini iwaranti yomkhiqizo?
Siqinisekisa izinto zethu nokusebenza. Ukuzibophezela kwethu kukwaneliseka ngemikhiqizo yethu. Kwiwaranti noma cha, kuyisiko lenkampani yethu ukubhekana nokuxazulula zonke izingqinamba zamakhasimende ezenelisa wonke umuntu
Ingabe uyakuqinisekisa ukulethwa okuphephile nokuvikelekile kwemikhiqizo?
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha okuyingozi okukhethekile kwezimpahla eziyingozi kanye nabaqinisekisi bokugcina abandayo abagunyaziwe bezinto ezizwela ukushisa. Ukupakisha kwangochwepheshe nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile kungahle kubangele inkokhelo eyengeziwe.
Kuthiwani ngemali yokuthumela?
Izindleko zokuthumela zincike endleleni okhetha ngayo ukuthola izimpahla. I-Express imvamisa iyindlela eshesha kunazo zonke kepha futhi ebiza kakhulu. Nge-seafreight yisisombululo esihle kakhulu semali enkulu. Amanani ezimpahla ngqo singakunika wona uma sazi imininingwane yenani, isisindo nendlela. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
ISino Stainless Steel Corporation Limited.
Ucingo: + 86-13816639199
Ucingo: + 86-21-54725826
Ifeksi: + 86-21-54725826 - 8011
© Copyright - 2010-2019: Wonke Amalungelo Agodliwe.